Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW Nadiifiyaal Qolka Qubeyska Nickel Faucet Centerset
qiimeeyay 4.91 out of 5 ku salaysan 35 ratings macaamiisha
(35 dib u eegista macaamiisha)
Qubeyska Qolka Musqusha ee loo yaqaan Nickel ee WOWOW waa mid kharash badan. Badeecad tayo sare leh oo leh qaab casri ah. Dukaamee qolka fadhiga musqusha ee loo yaqaan 'Nickel Cleraw Nickel'!
2321200 tilmaamaha rakibaadda
Qubayska suuliga musqusha lagu cadaadiyo nickel 2321200
Diyaar ma u tahay inaad qaabayso ama aad dib ugu habeysato musqushaada? WOWOW waxaan aaminsanahay qaabeynta ama dib-u-habeynta musqushaaga inay kuxirantahay agabka ugu tayada wanaagsan ee waxqabadka wanaagsan. Hadana tani waa inay noqotaa mid qof walba awoodi karo. Qurxinta ama dib-u-qurxinta musqushaada badanaa ma ahan dhacdo raqiis ah. Iyo sababao miisaaniyadeed ama dib-u-dhac aan la saadaalin karin, qofku wuxuu raadsan karaa tubooyin raqiis ah maaddaama ay ka hareen miisaaniyadda. WOWOW waan fahamsanahay tan, sidaa darteed aniga waxaan suurtogal u ahay inaan iibsado qasabadaha suuqa ugu sarreeya qiimo jaban. Miyay taasi u muuqataa mid aan la rumaysan karin? Ma aha markaad aqrinaysid annaga iyo waxyaabahayaga.
WOWOW waa nooc cusub oo wax soo saar leh, oo soo saaraya agabyo tuubooyin wanaagsan sida tubooyinka biyaha. Si loo waafajiyo noocyada naqshadaha iyo qaababka oo dhan, WOWOW waxay had iyo jeer soo bandhigtay xulasho balaaran oo tubooyin tayo leh oo la jaan qaada baahida macaamiishayada oo dhan. Iyo sida aad ku arki karto boorsada biyaha ee WOWOW, waxaan shaqaaleysiinay naqshadeeyayaasha ugu fiican si aan kuugu soo bandhigno alaabada musqusha ee ku habboon joornaalka naqshadda. Waxaan aaminsanahay in WOWOW ay ku siineyso saamiga ugu sicirka ugu wanaagsan ee suuqa oo ay ku jiraan tubooyinkayaga sare ee naqshadeynta, badeecad tayo sare leh, iyo weliba qiimayaal la awoodi karo.
Qubayska musqusha ee casriga
Qubayska buluuga ah ee buluuga ah oo wali casriga ah ee 'WOWOW' wuxuu ka kooban yahay laba gacan gacan biyood, mid biyo biyo diiran iyo mid biyo qabow. Naqshaddan retro ayaa iftiinaysa musqushaaga taabasho gaar ah. Sidaad ogtahay, tubooyinka musqulaha ayaa ah dhibco si gaar ah diirada loo saarayo, in kastoo ay yihiin waxyaabaha ugu yar ee musqusha. Sababtaas awgeed waxaad awood u siin kartaa inaad taabato muraayad gaar ah oo musqushaada ah, oo aadan ku koobnayn waxqabadka iyo tayada. Musqulaha buluuga buluuga ah ee buluuga ah way fududahay in lagu daro tuubbooyinka kale ee musqusha ee WOWOW oo laga heli karo qaab isku mid ah isla markaana dhammeeya sida loo yaqaan 'nickel tubob' tubada loo cadayay oo loo cadayay.
Dareerka naxaasta leh ee la caddeeyay waxaa sameeya daaha naasaha ”nikkel” kaas oo lagu dhammeeyay iyadoo lagu ruuqayo burush bir ah. Taasi waa sababta saxda ah ee musqusha tuubada buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel' u cadayday ay u heshay muuqaalkeeda qoraalka. Buuggan yar ee loo yaqaan 'nickel' ee la dhammeeyay wuxuu siinayaa tuubada musqusha midab diiran oo gaar ah. Ka sokow taasi, waxay abuurtaa muuqaal gaar ah oo leh kala duwanaantiisa iftiinka iyo hooska dusha sare ee tubbada qubayska. Sababtoo ah dabeecaddeeda gaarka ah WOWOW musqusha buluuga ah ee buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel ብሩyo nickel' kuma jiri doono meel ka baxsan shan hudheel xiddig ama guri gaar ah.
Qubayska buluuga ah ee musqusha fasalka koowaad
Markiiba waxaad dareentaa tayada tubada musqusha markaad gacmahaaga ku haysato. Ma jiraan wax ka xumaynaya ka badan sidii loo rakibay tubbada musqusha cusub oo bilaabaysa inay daadiso kadib muddo gaaban. Codkan daadinta ayaa kaa dhigi kara qof waalan, gaar ahaan habeenkii. Markaa badiyaa ma jiraan xalka kale oo aan ahayn in la beddelo tubbada musqusha. Taasi waxay noqon kartaa dhacdo qaali ah, oo tubada qubayskaaga raqiis ah ayaa noqotay mid aan aakhirka ahayn. WOWOW waxaad ku baran doontaa dhinaca kale in badeecooyinka tayada sare leh aysan qasab ahayn inay ka dhigan yihiin qiimo sare sidoo kale. WOWOW waxay cadeyneysaa inaad ka heli karto tayo sare qiimo jaban. Musqulaha buluuga ah ee buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel bululet' wuxuu bixiyaa saldhig ballaaran oo naxaas ah, qolof bir ah oo aan kala-saarin iyo dhisme waara. Kordhintu waa ujeedka ugu weyn marka tubbada tuubada buluuga ah ee WOWOW la sameeyay. Taasina waa waxa aad isla markiiba ogaan doontid.
Tuubbo kasta oo tubbada biyaha WOWOW ee bullaacadda ah ee buluugga ah waxaa laga sameeyay naxaas. Qubayska maydhashada musqusha gacantu ma aha wax la mid ah CUPC- iyo NSF 61-oo la aqoonsan yahay. Musqulaha buluuga buluuga ah ee WOWOW ayaa leh durdur firfircoon oo joogto ah. Ka sokow, ma ku arki doontid wax daabacan farta dusha musqulaha musqusha. Way fududahay in la nadiifiyo oo sidaas awgeed ay fududaato in la dayactiro. Sidan ayaad kuheli doontaa tuubbo buluug ah oo dhalaalaysa oo dhalaalaysa muddo dheer.
Qubayska musqusha ee musqusha ku shaqeeya oo qiimo badan
Qolka musqulaha buluuga ah ee WOWOW ee loo yaqaan 'nickel bulled nickel' ayaa lagu dhammeystirey gobolka tikniyoolajiyada farshaxanka si uu kuu siiyo soo jiidasho iyo adkeyn waqti leh. Tan oo dhanna waa qiimo la awoodi karo. Iskusoo wada duuboo, ABS-ayer-ku wuxuu kuu keydiyaa 50% biyo, markaa waxaad tan ku arki doontaa biilkaaga biyaha sidoo kale. WOWOW markaa wuxuu kaa caawinayaa inaad siyaabo badan u keydiso.
Marka laga reebo qiimaha soo jiidashada leh iyo astaamaha biyaha keydinta, musqusha qubayska bullaacadku waa sida ugu fudud ee loo rakibi karo. Qubayska 4-inji ah ee kubbadda qubayska ayaa lagu rakibi karaa waaskada musqulaha 3-dalood ka buuxay. Qubayska buluuga ah ee musqulaha buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel ብሩyeerka' waxaa ka mid ah goolhaye kor u kaca sidoo kale. Dhamaan qalabka rakibida ayaa la socda tubada qasabada. Musqusha musqulaha ah ee loo yaqaan 'nickel buluug' ee saabuunta buluuga ah waxaa si fudud loogu rakibi karaa tilmaamaha qaybinta ee cad. Xitaa haddii aadan xirfadle ahayn. Sidan ayaad ku badbaadin kartaa xitaa kharashyo badan.
Shixnad bilaash ah iyo 90-maalmood oo lacag celin dammaanad ah
Maaddaama ay WOWOW u taagan tahay badeecadeeda ayna ku qanacsan tahay tayada tubooyinka ay leedahay, muddo 3 sano ah oo damaanad qaad ah ayaa lagu bixiyaa foornada bulukeetiga bulukeetiga. Haddii musqulaha buluuga buluuga ah ee WOWOW u fulin weydo ugu badnaan sidii lagu ballamay, waxaad heli doontaa astaanta buluugga buluuga ah ee buluuga ah ee la cadaydo iyadoo aan wax dhibaato ah.
Ka sokow, WOWOW waxay ku siinaysaa lacag-celin 90-maalmood oo lacag celin damaanad ah ah. Markaad u maleynaysid inaanan ku gaarsiin wixii aan soo bandhignay, waad noogu soo diri kartaa tubada musqusha adigoon wax su'aalo ah lagaa weydiinin. WOWOW waxay u taagan tahay dhawrista ballanqaadyadeeda, haddii aadan lahayn dareenkaas, waxaan qaadi doonnaa mas'uuliyaddaas tan. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u helno tubbada tubbada tubbada ee loo yaqaan 'nickel ብሩyo nickel', waxaad isla markiiba lacagtaada ku soo celin doontaa!
Sida alaabada WOWOW oo dhan, musqulaha buluuga ah ee la cadaydo ayaa si bilaash ah laguugu keenayaa meel kasta oo adduunka ah. WOWOW waxay leedahay dhagaystayaal balaaran oo adduunka oo dhan waxayna wada jecel yihiin tayada qiimaha wax ku oolka ah ee WOWOW ay bixiso. Waxaan jeclaan lahayn inaad sidoo kale isku daydo alaabadayada. Waana hubnaa inaadan waligaa u badali doonin inaad gasho qasabadaha kale mar dambe.
Faa'iidooyinka Qubayska Qubeyska Musqusha Nickled Nickel si kooban:
Design Naqshad Classic ah oo wali casri ah
Finish dhammeystiray burushka nickel burushka ah
Way fududahay in lagu daro tuubbooyinka musqulaha kale
Qubayska musqusha oo aad u sarreeya
 Laga sameeyay agab tayo sare leh
SKU: 2321200 Categories: Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha, Qubeyska Musqusha Tags: 4 inch, Nickel caday, Kala saar gacanta
NSF waalka dhoobada dhoobada, biyo isku qasan, 3-god 4 gudaha naqshadaha xarumaha, si sahlan loo rakibo
Deck dhajinta, 3 rakibida daloolka 4 inji
Biyaha kulul iyo biyaha qabow si gooni ah ayaa loo kontaroolaa
Xakamaynta biyo kulul iyo qabow
Qasabada * 1, Qeexitaanka rakibaadda * 1, Joojiye Qulqulka Qulqulka * 1
Dhab ahaan saxanka aan doonayay. Waxaan aaday dhowr dukaan oo ma helin wax aan jeclahay. Tani waxay ahayd mid aad u fudud in la rakibo, waxayna la timid wax kasta oo aad u baahan tahay oo ay ku jiraan lifaaqyada tuubbada iyo gororiyaha. Si fudud loo nadiifiyo, si fiican ayey kor ugu haysaa carruurta, ma weydiisan karto wax intaa ka badan.
Kani waa qasabad qurxoon oo soo jiidasho leh taas oo la timid qaybo badan oo aan u baahanahay intii aan fileynay. Uma baahnin inaan aadno dukaanka si aan uga soo iibsanno qeybaha saxanka hoostiisa oo mararka qaar aan la imaan qasabad. Waxaan sidoo kale qiimeynay qiimaha sheygan. Waxaan dareemeynay inaan helnay gorgortan wanaagsan.
Waxaan soo iibsaday tan anigoo raadinaya wax aan qaali ahayn. Waxaan la yaabay sida culus iyo tayada sare leh ee ay u dareentay markii aan furay. Waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican, iyo qayb yar oo ka mid ah qiimaha noocyada caanka ah.
waxay igu qaadatay 2 saacadood in aan un-rakibo labada qasabadood ee hore ee musqusha. Kani si aad ah ayaa loo qaabeeyey, kaliya ma ahan inaan ku rakibi karo ~ 10 min, laakiin sidoo kale waxaan aaminsanahay inaan un-rakibi karo wax ka yar 15 daqiiqo markii loo baahdo mustaqbalka. Runtii aad baan ula yaabay sababta qasabadaha qasabka ah loogu qasbay in si aad ah loo qaabeeyo in laga saaro.
Aad ayaan ugu qancay qasabadan. Waa culeys, gacan qabasho siman, socod wanaagsan oo biyo ah waana qasabado tayo leh. Waxaan ahaa qoraal, ma ahan nooc caan ah oo aan arko oo aan aad ula dhacay. Xaqiiqdi ma iibsan laheyd calaamadahan markale.
Musqusha waaskada musqusha ee cajiibka ah. Wax walba waxaa lagu soo daray si fudud loo rakibo. Jeclaan muuqaalka iyo dareenka qasabaddayda cusub!
Tuubadaani waxay ahayd sidaan rabay anigoo qorshaynaya dib u habeynta musqusha. Aad baan u jeclaaday qubayskeena sayidka oo aan mar labaad ugu iibsaday kan ugu weyn. Waa quruxsan oo muuqaal ah. Ku darso qiimaha waa sax. Dhaafay filashadaydii
Alaab aad u fiican, waxay umuuqataa mid aad ufiican waana fududahay in la rakibo. Baakadaha ayaa fiicnaa, waxay ilaalisaa sheyga. Runtii waan jeclahay qasabada sare si aad si fudud gacmahaaga hoostiisa ugu gasho. Dhamaad aad u wanaagsan, si adag loo dhisay.
Tuunbo aad ufiican iyo waliba qirashooyin ay lasocoto. Tuubbooyinka tidcan ee tidcan waa kuwo fiican, dheer (20 ″ oo lagu daray) iyo waajibaad aad u culus oo culus, iyo dheecaanku sidoo kale waa mid faaiido leh!
Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay iibsigan, qasabadu waxay umuuqataa mid aad ufiican oo dareemaysa inay adagtahay qiimaha. Halkaas waxaad sidoo kale kaheleysaa khadadka jilicsan ee tayada adag… .BAA SII! intaas maahan, waxaad sidoo kale heleysaa waalka fure ee nooc ka mid ah kaas oo ay fududahay in la geliyo, si sahlan loo isticmaalo oo isna u muuqda mid wanaagsan. Qoomamo ma leh.
Waan jeclaanay qasabadani. Waxay ku timid Dhamaystir bulaacad iyo rakibyo loogu talagalay xirmooyinka biyaha. Xaqiiqdii waan dalban lahaa badeecadan mar labaad
Tani waa qurux badan oo aad u fudud in la rakibo xirmo. Waxay la timid wax kasta oo aad u baahan tahay inaad rakibto. Qaaday oo kaliya dhowr daqiiqo si loo soo dajiyo iyo waxa ay u muuqataa oo u shaqeeya weyn. Waxaan iibsan doonaa mid kale.
Sababtoo ah tuubada tuubada tuubada ee qasabadaha ee saarnayd waxay ahayd oo kaliya inay kudhowaan miiska miiska oo ay biyuhu ka soo daateen saxanka. Waxaan iibsaday gabalkan. Aad ayey ugafiican yihiin waxa ku soo galay xeradeena waxayna ku haboonaan lahayeen in lagu isticmaalo gurigeena. Ku faraxsanahay iibsigan.
Qiimo qurux badan Si fudud loo maareeyo. Jacaylka waalka riixista. Xitaa aan ka warqabin ayaa la yimid.
Tuubadaani way shaqeysay si aad iyo aad uga qiimo badan dukaan kasta oo iga ag dhawaa. Way fududahay in la rakibo oo waxay umuuqatay mid fiican.
Ku faraxsanahay inaan tan ku helo qiimo aad u weyn. Tayada ayaa u dhiganta qiimaha laakiin waxay si fiican ugu shaqeysaa musqusha cunuggeena.
Haddii aan ku dhex gurguurto saxankeyga oo aan dareemo awoodda ka dambeysa qasabaddan waan jeclaan lahaa. Waxaan dareemayaa inay gacmahaygu baabtiis yihiin markasta oo biyaha ka yimaadda Ilaahay tuubbada ku soo dhacday ay ku dhacaan.
Waxaan rakibnay 2 ka mid ah labadan bilood ka hor ..
Way fiican yihiin! Waxay yihiin kuwo aad u qurux badan oo qiimo leh !!
Waxaan soo iibsaday seddex qaybood oo ka mid ah xirmooyinka qasabada biyaha. Waxaan ku qarashgareyn lahaa labanlaab intaas laakiin kama aanan helin miisaaniyadda. Kuwani waa tayo aad u fiican oo muuqaal fiican leh. Waxaan haystay tuubbo xirfadlayaal ah oo rakibay wuxuuna yiri waxay ka mid yihiin noocyada ugu wanaagsan ee uu soo arkay. Aad ayaan kugula talin lahaa.
Kuwaan waxaan u adeegsaday inaan ku wanaajiyo musqulaashayda. Way fududahay in la rakibo oo si habsami leh u shaqeeya. Waan jeclahay sida wanaagsan ee ay u shaqeeyaan
Tuubada suuliga ugu fiican ee aan iibsaday! Qiimaha Fantastic, si fudud u rakibi muuqaal muuqaal leh, ayaa si fiican u shaqeeya!
wax soo saarka weyn. haddii aad u baahato mid kale hadhow hubaal waad iibsan doontaa mid kale oo rakibay waxay u muuqataa wax weyn.
Tuubbo weyn oo lagu beddelo musqusha hoose. Si fudud loo rakibo, oo la shaqeysa dib u dhac la'aan. Raadinta inaad iibsato mid lamid ah qubeyska kore ee xiga.
Waxaan u baahday inaan iibsado wax kale oo aan ku beddelo qasabadda qasabadda. Fiirfiican Qiimo wanaagsan.
Tayada iyo qiimaha waa # 1 sheygan. Qalab fudud oo fudud iyo wax kasta oo aad ugu baahan tahay rakibidda ayaa ku jirta sanduuqa. Ma garaaci kartid taas meel kale.
Waxaan ka iibsanay 3 kamid ah labadan musqulood. Waan jeclahay joojiyaha bulaacada. Waa badhan vs wax ku dheji. Waxay ka dhigaysaa inay u muuqato mid aad u nadiif badan oo aad u fudud in la isticmaalo. Guud ahaan, naqshad jilicsan oo qaab badan.
Lagu rakibay illaa 30 daqiiqo. Ka soo cusbooneysii mid hore oo waxay ahayd feker fiican in laga dhigo musqushayada mid casri ah
Jacaylka qaabeynta iyo dhamaadka nel niklka. Si fudud loo rakibo. Waxaan leeyahay seddex musqulood oo aan ku leeyahay qasabadani dhammaantood.
Iibsaday tan si loogu beddelo qasabaddii hore ee musqusha qaybta dhifka ah ee la isticmaalo. Waxay la timid wax kasta oo aan ugu baahdo shaqada. Aad baan ula dhacay tayada qasabadani.
alaab aad u wanaagsan! Waxaan la yaabay sida wanaagsan ee loo sameeyo. Waxaan markale ku iibsanayaa mid kale musqusha kale.
Waxaan bedelay labada waji ee qubayska sayidkooda oo waxay ahayd dabayl. Si fudud loo rakibo waxay umuuqdaan kuwa fiican oo qiimahaas ah waxaan badalayaa musqulaha kale sidoo kale.
Si fudud loo rakibo, casri ah, oo aan qaali ahayn. Waxay umuuqataa mid laga cabsado musqusha badhkeed.
Qiimaha weyn wuxuu umuuqdaa mid qaali ah oo si fiican u shaqeynaya. Qiimaha dhabta ah ee lacagta Waxaan kugula talin lahaa tan haddii aad u baahato qasabad cusub ama muuqaal uun la casriyeeyay
Waxaan ubaahanahay qasabad u dhigma qubeyskeena dukaamada maxalliga ahna ma haysan wixii aan jeclaannay. Tuubadaani waxay u shaqeysaa si qumman! Si fudud loo rakibo iyo muuqaal heer sare ah
Waxaan soo iibsaday mid ka mid ah qasabadaha oo aad ayaan u jeclaaday waxaan laba kale u iibsaday musqulaashayda kale. Si macquul ah ayaa loo qiimeeyay waxayna nadiifisay saxammada musqusha! Shayga ayaa si dhakhso leh oo qaab wanaagsan yimid. Tuunbo Cajiib ah Waxaan aad ugula talinayaa qasabaddan!
Qiimuhu wuu saxsanaa oo way fududahay in la rakibo. Waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee ay u shaqeyso iyo sida wanaagsan ee ay u egtahay. Dhab ahaantii qasabad fiican oo muuqata. Qalab fudud oo fudud
Kusoo Wareegyada Musqusha Isku-Darka WOWOW oo Ay Ku Yaraan Yaraantihiin Swivel